आधुनिक प्रेम | www.video-smritisangraha.com
About Meमेरो बारेमा
Nepali Unicodeनेपाली युनिकोड
More Videosअन्य भिडियो
Home » Featured , अवर्गीकृत » आधुनिक प्रेम
Posted by Ram Gurung Posted on 11:51 AM
विद्रोहीहरुको आक्रमक कारबाहीलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन शाही सुरक्षा प्रशासनले देशभर संकटकालको घोषणा गरेको थियो । माओवादीको नाउँमा खाओवादीहरु सक्रिय रहन सक्ने स्थितिमा त्यतिबेला जसले जे गरे पनि माओवादीको नाउँ मुछिन्थ्यो । लुटपाट, हत्या, हिंसा, अपहरणका घटनाहरु सामान्यजस्तै थिए । जनताको जनधनको कुनै सुरक्षा थिएन । कतिबेला कसलाई के हुन्छ थाह हुदैनथ्यो निकै त्रासदीपूर्ण जीवन जिउन बाध्य हुनुपथ्र्यो त्यतिबेला ।
घरको नाजुक आर्थिक स्थितिमा वेरोजगारी समस्याले ग्रस्त भएर उसले सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवेश गरेको थियो । हुर्कदै गरेको प्रेमका मुनाहरुलाई ब्यारेकभित्रको बन्दी जीवनबाट विकसित गराउन त्यतिबेला ज्यादै मुश्किल हुन्थ्यो । बाहिर निस्के विद्रोहीहरुको निशाना बन्नुपर्ने जोखिम थियो । भित्रबाट त्यो सम्भव थिएन । यद्यपि प्रेमका लागि ज्यानै जोखिममा राखेर भए पनि आफ्नी प्राण प्यारी निकट भविष्यकी अर्धांगिनीसँग हरेक शनिबार भेट्न पुग्थ्यो ऊ ।
एकातिर बाक्लो जंगल, शान्त रमणीय चौरका केही रुखहरुले गोप्य जस्तो बनाई दिएको एकान्त त्यो स्थान प्रेम जोडीहरुका लागि एउटा डेटिङ स्थलको रुपमा विकसित हुदै थियो । त्यही स्थल थियो, जहाँ उनीहरु रुखको छेल पारेर सुमधुर प्रेमालाप गर्दै एक अर्कामा लिप्त थिए । अंगालोको न्यानोपनामा ढल्केकी उनको मुहारतिर आएका केशराशी मुसार्दै भन्थ्यो ऊ ।
“...किन तिम्रो यति धेरै मायाँ लाग्छ ? जस्तो जीवन जिउनु परेपनि ज्यानै जोखिममा राखेर भए पनि तिमीलाई नभेटी बस्नै सक्दिन सानु म त । आफू ब्यारेकमा रहे पनि मन त खाली तिमीलाई पछ्याइरहन्छ ।.....................कति अभागी है सानु हामी ?”
“...अँ त है । तर चिन्ता नलेऊ मेरो राज । हामीले समयको प्रतिक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । एक न एक दिन प्रतिक्षाको मीठो फल अवश्य स्वाद लिन पाइनेछ । .... म पनि त तिमीप्रति समर्पित भएर आएको छु । ........मलाई पनि एक्लै बस्दा तिम्रो कति याद आउँछ । तिम्रो फोटो हेरेर दिन बिताउनुसिवायः मसँग अर्को उपाय हुदैन त्यतिबेला ।” काखमा पल्टिरहेकी उनी उठेर गाला–गालामा, ओठ ओठमा चुम्बन गर्न थालिन् ।
“..........मेरी काली ! मलाई कति मायाँ गर्छौ हगि !” भन्दै अझ वलिष्ठ अंगालोमा कस्दै चुम्न थाल्यो ।
“....मायाँ मात्रै ? म तिमीलाई ज्यानै दिन सक्छु राज । तिम्रो प्राप्तिका लागि मैले सर्वस्व नै किन त्याग्नु नपरोस् । तिम्रो खुशीका लागि म ज्यानै त्याग्न पनि तयार छु ।”
प्रेमको उन्मादमा अंगालोभित्र बेरिएर यस्तै प्रेमालापहरु हुदै थिए । एकान्तमा रुखहरुको छेलमा एक अर्काका गोप्य शारीरिक मागहरु के के थिए, के के पूरा भए, त्यो प्रेमको समर्पणभित्र उल्लेखनीय भएन ।
आलिंगन र ब्यग्र सन्तुष्टिको चरणमा बेहोसझैं भएर एकअर्कामा पूर्ण लिप्त हुदा समय कतिखेर चिप्लिएर गइसकेछ, पत्तै भएन । साँझ परिसकेको थियो । बिग्रिएका कपडा र केशराशीहरु ब्यवस्थित गर्दै उनीहरु जाने तर्खर गर्दै थिए । अचानक जंगलतिरबाट हतियारधारी जत्था आएर केरकार गर्न थाले । उनीहरु त्रस्त देखिए ।
“भन्, तँ आर्मी होस् ? कि पुलिस होस् ?” छातीको टिसर्ट समाएर एउटाले सोध्यो ।
ऊ केही बोल्न सकेन । चुपचाप रह्यो ।
“ए केटी, भन्, यो आर्मी हो कि हैन ?” पक्रेको उनको हात झट्कारेर अर्कोले सोध्यो ।
उनी डराईन् । एकपटक प्रेमीको अनुहारमा हेरिन् र भनिन्, “हो, तर मलाई केही नगर्नुस् । प्लीज मलाई जान दिनुस् ।”
यति जवाफ आएपछि उनलाई जान दिईयो । उसले उनी गएको एकोहोरो हेरिरह्यो ।
त्यसपछि शुरु भयो, उसमाथि यातना र सोधपुछ । ऊ केही बोलेन । मात्र उनी गइरहेको सम्झिरह्यो । पुगी कि पुगिन भनेर सोचिरह्यो ।
खोला तरेर उनी उकालो चढ्न लाग्दै थिई । गोलीको आवाज सुनियो । उनले अनुमान लगाईं, उसलाई गोली हानेर मारियो । तर उनी दुःखी भइनन् । त्यसैको एकमहिना पछि उनको अर्कै केटासँग प्रेम विवाह भएको सुनियो ।
Labels: Featured, अवर्गीकृत
Nepali Film (4)
‘आऊ प्रिया...’ बोलको आधुनिक गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
लामो समयदेखि प्रवासमा रहेर पनि भिडियो निर्देशनमा रमाएका केशव कटवालको शब्दमा रहेको आधुनिक गीत ‘आऊ प्रिया...’ बोलको म्युजिक भिडियो हालै सार्...
भिमु गुरुङको सुगन्धित सिर्जना पुष्प ‘टिपूँ कि फूल ट्याप्पै’
प्रवासी जीवनलाई विट मार्दै नेपालमै संघर्ष गर्छु भन्ने संकल्प गरेर स्वदेश फर्केका प्रकाश ढकाल ‘अञ्जान’ मोडलिङको क्षेत्रमा झुल्किएका छन् । ...
मायाँलुको शहरमा मेरो गाउँमा घर छ
खोक्रो आदर्शमा बाँच्ने एउटा दुर्लभ भावना न होः पुरुषः शहर पसी उनकै घर बसेको बस्दा–बस्दै मायाँमा फसेको मायाँलुको शहरमा मेरो गाउँमा घ...
सम्बन्ध नै टुटेपछि
सम्बन्ध नै टुटेपछि, बोल्नुको के अर्थ भो ? तिमीसँग मन अब खोल्नुको के अर्थ भो ? तिमी खेल सम्झ्यौ, बर्षे भेल सम्झ्यौ । मेरो ...
नेपाली चलचित्र झोले
नेपाली लघु–चलचित्र छल
Copyright © (2008-2019). www.video-smritisangraha.com - All Rights Reserved
Template Bloggerized by Smritirogi